EyeKhala 21, 2018 admin
CME Bitcoin ingxelo amakamva ibonisa urhwebo unyuse 93% ku q2 2018
ezinkulu ahlobene yemarike ehlabathini, i Chicago Mercantile Exchange (CME) ubhale ukuba avareji umthamo imihla Bitcoin amakamva, liye lakhula lesi- 93% kwikota yesi-2 ka 2018. kwakhona, umdla evulekileyo Bitcoin unyukile yi 58%, leyo ukwanda phezu 2,400 izivumelwano.
ngekusasa Bitcoin avareji umthamo mihla q2 wakhula 93% phezu yekota edlulileyo, ngelixa umdla evulekileyo uvelile 2,400 izivumelwano, a 58% Nyusa. Funda kabanzi zorhwebo #Bitcoin lekusasa: https://t.co/adjWVWXBPQ pic.twitter.com/UQWC3nGGrI
— CMEGroup (@CMEGroup) EyeKhala 20, 2018
Ngoku Equity platform crowdfunding StartEngine yamkela Bitcoin ukuba utyalo ngokhuselo
StartEngine, iqonga equity crowdfunding US ezisekelwe, wamemezela livuma igalelo yotyalo-Bitcoin. yasekwa ngonyaka ka- 2014, inkampani iye yanceda ukukhulisa imali engaphezu 150 zokuqala. Ummiselo Crowdfunding imithetho I umzuzwana ukuba lubeke portal mali kufuneka basebenze kwibhanki & imali ivenkile yomtyali-in Escrow, de sokuqalisa ifikelela ithagethi yayo ubuncinane. Ngaloo ndlela, StartEngine usebenzisana Prime Trust, ibhanki Nevada-based, ukuba le meko.
Prime Trust iya sigcine nje kuphela kodwa ukuguqula bitcoins zibe USD, ngokwenza ukuba ibhanki lokuqala ukuxhasa Bitcoin nokukhusela zimali crypto, ngokutsho ingxelo evela le nkampani. Ukusebenzisa lo msebenzi, amashishini nga ukuphakamisa ubuninzi $1.7 million ngonyaka ngamnye. Kuyaphawuleka, StartEngine uye waphakamisa ngaphambili $5 million kwinkxaso-mali.
Ingxelo Daily Market Kraken for 20.07.2018
$170M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje